Maxay dib u midoobi karaan ololka mataanaha ah? - Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Olol Mataano & Jacayl Rabaani ah / Maxay dib u midoobi karaan ololka mataanaha ah?
Olol mataano ah waxay ku guuleysan karaan wax kasta oo himiladooda gaarka ahi tahay. Tan ayaa loo muujin doonaa iyaga waqtiga ku habboon. Way ka duwan tahay qof walba. Dadka qaarkiis si fudud uma laha himilo noloshooda qaarkood. Waa wax iska caadi ah in loo maleeyo in qof walba uu hadaf leeyahay laakiin markasta sidaas maahan. Waxaa jira dad halkan u jooga si gaar ah inay nolosha la kulmaan oo ay ku dhex koraan casharada nolosha. Waxay doorbidaan inay noolaadaan mana dareemaan hamiga ah inay cayrsadaan hadaf.
Waxaad tahay xooggayga,
Anigu waxaan ahay hawo.
lammaane kaamil ah.
Waan isku dhici karnaa,
laga yaabaa in la tartamo.
howlgalka oo dhameystiran
Charlie Young wuxuu leeyahay,
Mahadsanid Charlie! ❤️
Aad u qurux badan, oo si fiican loo yiri 🖤🤗
Mahadsanid Ace, waad ku faraxday inaad ka heshay! ❤️
KK wuxuu leeyahay,
May 26, 2021 at 7: am 39
Qoraal aad u qurux badan !!
May 26, 2021 at 9: am 17
Mahadsanid Kaushal! ❤️
Sideen waqtiga uga dhigaa mid dhakhso badan ama gaabis ah?